Filtrer les éléments par date : dimanche, 14 janvier 2018
dimanche, 14 janvier 2018 22:28
Basikety: Mpanazatra 13 mianadahy nofanina
Mpanazatra eo amin’ny taranja Baskety niisa 13 no nofanin’ny Tale Teknika Nasionaly teto Antsirabe tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa manokana tamin’ny klioba FFPRO ka navoaka omaly sabotsy 13 janoary, tao amin’ny Hotel de Thermes no nanaovana izany.
Ity klioba ity no niantoka manontolo ny fikarakarana sy ny sara nahafahana nanao izany raha toa ka ny ligy no tokony ho hanao izany.
Sambany no nisian’ny tranga toa izao, izay tsy nolavin’ny Federasiona satria ho fampandrosoana ny taranja no tanjona.
Azo antoka hoy ity tompon’andraikitra ity fa hitondra fivoarana ho an’ny taranja Baskety eto Vakinankaratra ny nataon’ny FFPRO Antsirabe ka tokony halain’ny faritra hafa tahaka.
dimanche, 14 janvier 2018 22:14
Telma Super Coupe: Nisaraka 0 noho 0 ny Fosa Juniors sy ny Cnaps Sport
Ady sahala no nisarahan'ny ekipan'ny Fosa Juniors an'i Boeny sy Cnaps Sport Itasy nandritra ny lalao mandroso notanterahina teto amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga androany alahady tolakandro.
Niady ny lalao fa samy sahirana tamin'ny fampidirana baolina ny roa tonta. Amin'ny heriny anio ny lalao miverina eny Vontovorona-Antananarivo.
dimanche, 14 janvier 2018 22:05
Antsirabe: Manampy ireo tena sahira ny NAMANA
Olona sahirana ara-pivelomana an-jatony no nizaran’ny fikambanana NAMANA fanomezana ny zoma 12 desambra, teo anoloan’ny Tranompokonolona Antsirabe. Ny fanampiana ireo sahirana no antom-pijoroan’ity fikambanana ity ka ireo olona tena sahirana, toy ireo mpatory an-dalana sy ireo mpatory anaty trano « sachet » ireny no nizaran’izy ireo fanomezana teto.
Fikambanana iray efa nijoro nandritra ny enin-taona teto Antsirabe ny “NAMANA”. Nambaran’i Lin Rakotonindrainy, fa misy mpikambanana 35 mandrafitra azy ary izy ireo no mifanampy amin’ny fanangonana ireo fanampiana ho zaraina amin’ny mahantra.
Hatreto aloha dia mbola mionona amin’ny fanampiana ihany izy ireo fa tsy mbola tonga amin’ny tetika hanalana ireo olona sahirana ireo ao anatin’ny fahantrana hatreto.
dimanche, 14 janvier 2018 21:57
RN2: Tonga ny Zandary mandamina ny fifamoivoizana
Tapaka ny làlana eto Marozevo, eto amin'ny S, nisy kamioa navesatra niakatra, ka lany vitesy, dia nifatratra tamin'ilay kamioa tao aoriana.
Efa tonga eto ny Zandary roa amin'izao, mandamina ny fifamoivoizana, mandeha tsikelikely anaty fivilian-dalana mandrevo fotaka ireo fiara madinika. Sady atosika fa tsy afaka, misy mazda revo ihany koa ato anaty fivilian-dalana, efa 30 minitra tsy afaka.
dimanche, 14 janvier 2018 21:43
Morondava: Mpanao gazety roa voantso hanaovana fanadihadiana eny amin’ny Zandary
Mivoatra hafahafa ilay sambo lay na kotsia “Kajananas” nitondra sokatra niisa 500 avy any Maintirano haterina any Mahajanga, saingy fefiky ny ranomasina tao Morondava. Mpanao gazety roa mianadahy izao no nahazo fiantsoana halaina am-bavany eny amin'ny Zandary rahampitso, rehefa nikiry nitaky ny mangaraharaha mikasika ny nanjavonan'ny sasany tamin’ireo sokatra velona, tsy araka ny tarehimarika nifanatrehan'ny rehetra tamin'ny nanisana azy rehetra tratra.
Rehefa natao ny fanisana tamin’ny alarobia nahafefika ilay kotsia ka nahitana ireo sokatra dia 282 tamin’ireo 500 no velona. Nisy lehilahy iray voatazona. Ny Polisy no nandray an-tanana ny fanadihadiana. Nalefa teo ampelan-tanan’ny sampandraharahan’ny tontolo iainana ny sokatra velona. Nanara-maso ny fanisana sy ny fitaterana ireo sokatra ireo ny mpanao gazety tao Morondava.
dimanche, 14 janvier 2018 21:40
Route coupée au niveau du grand S Marozevo
Un camion chargé a reculé sur un autre. Embouteillage long de 5km, déviation boueuse de fortune en construction depuis 3h de temps.
dimanche, 14 janvier 2018 21:36
RN2: Route coupée au niveau du grand S Marozevo
dimanche, 14 janvier 2018 21:17
RN2: Tapaka ny làlana eo amin'ny S Marizevo
Nisy Kamio navesatra avy aty ambany Marizevo no lany vitesy, ka dia nihemotra nifatratra tamina kamiao hafa avy aty ambany ihany koa.
Samy nitsivalana izy roa ka dia tapaka tanteraka ny lalana. Samy tsy misy voahetsika ireo kamiao roa.
Efa mahatratra 5 km ny fitohanan'ny fiara. Efa ho 3 ora no niandry ny maro, miezaka manamboatra fivilian-dalana mitsofoka any anaty akata, fa da mifanjevo amin'ny fotaka, na dia tsy avy aza aloha hatreto ny orana.
dimanche, 14 janvier 2018 21:14
Vakinankaratra: Nihena ny halatr'omby sy fanafihana mitam-basy
Azo lazaina fa fahombiazana hoan’ny Zandarimaria Antsirabe ny taona 2017 raha ny tombana nataon’izy ireo omaly qabotsy 13 janoary.
Raha ny halatr’omby dia nihena izany, satria raha 56 ny tranga ny 2016 dia 34 kosa ny 2017 lasa teo.
Somary voafehy ihany koa ny fanafihana mitam-basy sy ny fanakanana fiara tamin’ny lalam-pirenena faha 7 sy faha 34, vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona sy ny Zandary.
Nomarihin'ny kolonely Rasamboson, Komandin’ny Vondron-tobimparitry ny Zandary Vakinankaratra, anefa fa ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona dia nitombo raha ny teto Vakinankaratra.